Tsimatimanota… mahamaty maty tsy manota vahoaka | NewsMada
Zandary 34 no hoe efa naiditra am-ponja noho ny fandikan-dalàna, firaisana tsikombakomba amin’ny dahalo, tafiditra amin’ny fakana an-keriny… 34 kosa ireo miaramila nidoboka am-ponja noho ny fanaovana herisetra sy vono olona, fanolanana, tsy fanajana zon’olombelona… Inona na ahoana koa ny manaraka?
Tsy vaovao amin’ny toy izany, ohatra, ny eo anivon’ny polisim-pirenena. Tsaroana ny namonoan’ny polisy ny mpitsara Rehavana Michel tany Toliara, desambra 2010. Na ny fampijaliana sy fandoroana tanàna nafitsoky ny polisy 30 tany Antsakabary, Befandrina Avaratra, febroary 2017. Vitavita sy tsy hitahita ho azy.
Izay ny fanta-bahoaka sy nahoraka ary nahabe resaka teo aloha, ankoatra ny raharaha hafa: afenina, tsy hadinodino, odian-tsy hita… Izay ny eo amin’ny fitandroana filaminana. Ahoana ny eo amin’ny sehatry ny fidintseranana, ohatra, ny fitantanam-bolam-panjakana, ny fananan-tany, ny fitanana ny lafintany, ny fampianarana… ?
Toy izany koa ny sehatry ny fahasalamana, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy ny an-dranomasina, ny eo amin’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana, ny fitantanam-panjakana any ifotony…? Saika tratran’ny fahalovana avokoa tsinona ny sehatra rehetra hatramin’izay? Na manjaka ny kolikoly, ny tsy fanarahan-dalàna…
Amin’izany rehetra izany, misy hatrany ny mihevi-tena ho tsimatimanota, ambonin’ny lalàna, lehibe tsy mba diso. Izay fisian’izay tsimatimanota izay no mampisy ny maty tsy manota. Tsy iza tsy aiza fa ny vahoaka ifotony any amin’ny tany lavitra fanjakana foibe: matimaty foana, mizaka any tsy eran’ny aina, iharan’ny jadona…
Mba hitsimbadika amin’izay ny raharaha amin’izao hoe fiovana sy fanovana izao, tsy misy ambonin’ny lalàna, tany sy fanjakana tan-dalàna… ? Ialana amin’izay ny fahazarana sy tarazo ary fomba ratsy hatramin’izay. “Tsy ny fombanao no atao ho lalàna, fa ny lalàna no tokony ho fombanao”, hoy ny ohabolana danaoa iray izay.